Ikhabhathi entle yokungena kwichibi labucala
Ifama sinombuki zindwendwe onguAmber
I-8km kuphela ukusuka kuhola wendlela, kwiindlela ezilungileyo, i-Helena Lake Ranch ibonakala ikwisigidi seemayile kude. Indawo yethu yindawo ethe cwaka, engasemanzini, irantshi yeehektare ezingama-200, kwiparadesi yendalo.
Idolophu encinci ekufutshane kwizinto ezisisiseko. I-45min ukuya kwiidolophu ezi-2 ezinkulu ezinazo zonke izinto eziluncedo. Ibucala ngokupheleleyo, indawo ephambi kwamanzi enemfuyo enobubele kakhulu kwindawo. Ngeekhabhathi ezi-2 kuphela, eziqelelene ngama-80m, yonwabele elakho ilizwe elincinci.
Ikhabhinethi ikwifama yethu esisebenzayo kodwa ibucala kakhulu, ibekwe kanye ngasemanzini, ngaphandle kwamehlo ekhaya lethu kunye ne-80m kude nenye indlwana ekukuphela kwayo. Sikuphela kwepropathi yabucala e-Helena Lake ke yindawo ethule ngokumangalisayo, nentle. Kukho ukuloba okugqwesileyo kwe-rainbow trout, ukukhwela intaba, ukukhwela iphenyane kunye namathuba angenasiphelo okubukela izilwanyana zasendle. Ebusika sinika i-skating, ukuloba i-ice kunye ne-snowshoeing.
Ikhabhinethi ayikho kwigridi ngokupheleleyo. Kukho izibane zelanga ngaphakathi nangaphandle kwekhabhinethi, i-sinki enejagi yamanzi amatsha, ifriji encinci ye-ice chest kunye ne-BBQ (i-propane ifakiwe). Ukuqubha kunye neetawuli zesitya, ilinen, izinto zokutya, izinto zokuthambisa, iiglasi, iimagi, ipani yentsimbi kunye nezixhobo zebbq ezibonelelweyo. Icoceke kakhulu, indlu yangaphandle esalwe ngesandla (indlu yangasese ye-dunny/drop) enezibane ezibengezelayo izinyuko nje ukusuka kwindlwana.
Amanzi okusela amatsha, iitotshi, amakhandlela, iinkuni zesitovu seenkuni kunye nomlilo ovuthayo. Lala ebhedini kwaye ujonge echibini kwifestile yomfanekiso ukusuka ebhedini yakho yobukhulu bokumkani. Ikofu, iti, itshokolethi eshushu kunye neswekile iyancomeka.
Kumganyana nje ongephi ukusuka ekhabhathini, sinekhitshi elincinane elisetyenziswa ziindwendwe ezinetoaster, imicrowave, ipleyiti eshushu, umenzi wekofu, iketile & nesiseko sokupheka esilungiselelwe ukusetyenziswa ziindwendwe. Kukho indawo yokuhlamba impahla kunye neshawari nalapho. Iitawuli, ishampu, isepha, isomisi seenwele kunye nesicoci sempahla sinikezelwe.
4.97 · Izimvo eziyi-279
Ummelwane wethu okufutshane kukumgama oziikhilomitha ezi-6 ngoko ngaphandle kwabahlali befama, kunokwenzeka ukuba ubone i-otter, i-beaver, ixhama, i-moose, ibhere, iingcuka, iingcuka, i-cougar, lynx, bobcat, badger, misc ezinye izilwanyana zasendle kunye nemfuyo ezulazulayo kune abanye abantu. Amaxhalanga amabini anempandla kunye ne-osprey ahlala kanye kwipropathi kwaye achitha ixesha elininzi emi emithini esecaleni kolwandle ekhangela intlanzi elunxwemeni.
Siyifama encinci esebenzayo ngoko kukho umntu ojikeleze ixesha elininzi onokunceda okanye aphendule nayiphi na imibuzo iindwendwe ezinokuthi zibe nayo kodwa siyayihlonipha imfihlo kwaye senza umzamo wokuhlala kude kwindawo yeendwendwe ngaphandle kokuba kuyafuneka. ukuba uneselfowuni, singanxibelelana ngokubhaliweyo nangaliphi na ixesha.
Siyifama encinci esebenzayo ngoko kukho umntu ojikeleze ixesha elininzi onokunceda okanye aphendule nayiphi na imibuzo iindwendwe ezinokuthi zibe nayo kodwa siyayihlonipha imfihlo…